Muxuu Shiinuhu U Sameysanayaa GPS U Gaar ah? | Xaqiiqonews
Muxuu Shiinuhu U Sameysanayaa GPS U Gaar ah?
Shiinaha ayaa dhawaan ku biiray wadamada aduunka ee fara ku tiriska ah kuwaasi oo isticmaala nidaamkooda gaarka ah ee GPS.
Talaadadii la soo dhaafay Shiinaha ayaa diray dayax-gacmeed ka caawin doono in shiinaha uusan ku tiirsanaanin GPS-ka Mareykanka.
Xilli cirka ay isku sii shareereyso xiisadda Shiinaha iyo Mareykanka ee ka dhalatay xanuunka Karoona Fayrus, Shiinuhu waxa uu xariga ka jaray mashruuc shabakad dayax-gamceedyo ah kuwaasi oo wadanka ka saacidi doono in uu sameysto GPS u gaar ah.
Sidoo Kale Aqri..Shiinaha Oo Diyaaradihiisa Dagaalka Ku Hubeynayaa Hub Cusub
Global navigation satellite systems (GNSS), waa nidaam dayax gacmeedka la shaqeeya kaasi oo fududeynaya in lagu ogaado goobaha ay joogaan dadka iyo deekaanada iyadoo la isticmaalaayo risiifaro koronto ku shaqeeya.
Dunida hadda, nidaamka GNSS, waxaa jira kuwa cayiman, sida GPS-ka Mareykanka, GLONASS-ka Ruushka,Galileo-ka midowga Yurub, iyo Beidou-ka Shiinaha ee dhawan shaqo bilaabay.